Kuzvipira kwedu ndekwe kupa vatengi vedu mhando yepamusoro
masevhisi uye zvigadzirwa pamitengo inodhura.
Mhepo ndiye anotungamira wepasirese mupi wezvinhu zvine simba zvekudziya magetsi, kufefetedza uye zvigadzirwa zvemhepo uye mhinduro dzakazara dzeHVAC kumisika yekugara, yekutengesa neyemaindasitiri.
Isu takatsaurira kutsvagisa nekusimudzira tekinoroji mumunda wesimba rekudzoreredza zvikamu uye smart control system kweanopfuura makore gumi nemapfumbamwe. Tine rakasimba kwazvo R & D timu iyo inounganidza anopfuura makore makumi mashanu ezviitiko muindasitiri, uye inowana gumi nemaviri patents gore rega.
Isu tine vanopfuura makumi mashanu vane ruzivo mahunyanzvi avo vane hunyanzvi muHVAC uye yekuchenesa dhizaini yekushandisa kwakasiyana kwemaindasitiri. Gore rega rega, isu tinopedzisa anopfuura zana mapurojekiti munyika dzakasiyana. Chikwata chedu chinogona kupa mhinduro dzakazara dzeHVAC kusanganisira mupangamazano weprojekti, dhizaini, kupa michina, kuisa, kudzidzisa, kugadzirisa, uye kunyange mapurojekiti ekeykey kukodzera zvinodiwa nevatengi vakasiyana.
Isu tinovavarira kuendesa yakanaka yekuvaka mweya yemhando yepasirese nemagetsi anoshanda zvigadzirwa, mhinduro dzakagadziriswa, mitengo inodhura uye masevhisi makuru kune vatengi vedu.
Ipa masevhisi ekubvunza uye zano, kusarudzwa kwechigadzirwa uye dhizaini dhizaini zvinoenderana nemapurojekiti.
Ipa mhinduro dzakagadziriswa nedesheni, kutenga, kutakura, kuisa, kudzidzisa uye kutumira mabasa
GMP Yakachena Kamuri Kugadziriswa
Kugadzira Maindasitiri HVAC Solution
Zvekutengesa Zvivakwa HVAC mhinduro
Yemazuva ano Farm HVAC Mhinduro
Dzidzo Kuvaka HVAC Solution
Dzimba dzekugara HVAC Solution